Hidhichi biyyoota godinichaa hunda kan fayyaduudha
Hidhichi biyyoota godinichaa hunda kan fayyaduudha Featured
Ijaarsi hidha guddicha Itoophiyaa biyyattii bira darbee ardii Afrikaatti biyyoota zoonichaatiif bu'aa dinagdee olaanaa waan qabaatuuf si'aayinaan xumuramuu akka qabu miseensonni Yunivarsitii Finfinnee lammiilee biyya alaa ta'an waltajjii gabbisa hubannoo Waajjirri Waltaasisa Hirmaannaa Ummataa Ijaarsa Hidha Guddicha Haaromsaa Itoophiyaa dhiyeenya qopheesserratti ibsameera.
Barattoonniifi barsiisonni biyya alaa yunivarstichatti argamanirratti ijaarsa hidhichaa ilaalchisuun hojiilee hanga ammaatti raawwataman dabalatee dhimmichaan walqabachuun hariiroowwan biyyoolessaa, waldhabdeewwan biyyoota yaa'a laga Abbayyaa jidduutti uumame dhabamsiisuuf mariiwwan taasifamaa jiran xiyyeeffannaawwan ijoo waltajjichaa turan.
Waltajjicharratti barreeffamoonni tattaaffii diippiloomaasii Itoophiyaan hidhichaan walqabatee taasisaa jirtu, mariin garsadeefi haalli fayyadama lageen daangaa ce'aniirratti xiyyeeffatan dhiyaataniiru.
Akka wayituma kana obsametti Itoophiyaan hidha maddisiisa humna elektrikii kan ijaartuuf sadarkaa guddinaa ama irra geesseefi baay'ina ummatashii dabalaa jiuuf barbaachisaa ta'ee waan aragameefi.
Qddeemsi ijaarsa hidhichaas ta'e maniin dhumaa haala biyyoota dhangala'ichaa gadi jiranirratti dhiibbaa hinuumneen kan raawwatamu ta'uun waltajjicharratti ibsameera.
Hidhichi biyyoota dhangala'ichaa mara fayyadamoo kan taasisu ta'uus hayyoonni waltajjicharratti hirmaatan eeraniiru.
Biyyoota dhangala'ichaa jidduutti hidhichaan walqabatee waliigalteefi walamantaa uumuuf gama Itoophiyaatiin hojjetamaa jiraachuu kan eeran dhiyeessitoonni waraqaa, qorattoonni, gaazexeessitoonniifi qaamoleen dhimmi ilaallatu biroon adeemsa hidhicha akka daaw'ataniif haalonni mijaa'uusaaniis ibsaniiru.
'Ammaan tana Misir ijaarsa hidhichaa balaaleffachuu keessaa baatee gara haala adeemsa guutiinsa bishaaniifi bulchiinsa hidhichaarratti mariyachuutti dhufteetti' jechuunis hayyoonni kunniin eeraniiru.
Barattoonniifi hayyoonni biyyoota adda addaarraa dhufanii Yunivarsitii Finfinneetti barachaafi barsiisaa jiran gamasaaniin hidhichi ummata biyyattii bira darbee biyyoota godinichaatiif faayidaa akka qabu kan hubatan ta'uu addeessu.
Lammiileen Sudaan Kibbaa Amulee Niiksaniifi kan Ruwaandaa Nitaakileemuunguu Maatiwu akka jedhanitti, ijaaramuun hidha haaromsaa biyyasaanii dabalatee ummatoota hiyyeeyyii biyyoota Afrikaa bahaa keessatti argamaniif wabii kan ta'uudha.
Yunivarsitichatti barsiisaa kutaa barnootaa Gi'oogiraafii kan ta'an Pirofeesarri Walta'aan K.N Siingi gamasaaniin, ijaarsi hidhichaa kanaan dura ijaaramuu akka irra tureedha kan ibsan.
“Qabeenyasaaniirratti murteessuu kan danda'an biyyootuma qabeenyichi itti argamu waan ta'aniif 'haadha bishaanii' jedhamtee kan waamamtu Itoophiyaan dheebotaa mirga qaamolee gita bittootaatiin kaa'ameef kabachiifachuuf ifaajjuunis sirrii miti” jedhaniiru. Hojiin Itoophiyaan raawwataa jirtu sirrii ta'uus ni ibsu.
Ittigaafatamaan Qunnamtii Ummataa Waajjira Mana Marii Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaa, Obbo Hayiluu Abrahaam gamasaaniin, “Itoophiyaan hidhicha ijaaraa kan jirtu jireenya ummatashii fooyyessuuf malee eenyuyyuu miidhuuf miti" jedhan.
Kanaafuu ummanni addunyaa haala kanaan hubachuu qaba jechuun hirmaattonni waltajjichaas bakka deemanitti dhugaa jiru beeksisuudhaan qoodasaanii akka bahataniif gaafataniiru.
Walumaagalatti ijaarsi hidha guddichaa hirmaannaa ho'aa ummatoota biyyattiitiin geggeeffamaa jiru akka yeroowwan adda addaatti ibsamaa tureefi jiru qabeenyicha karaa haqaqabeessa ta'een faayidaaf oolchuu waan ta'eef qaamoleen biyyoonis ta'an qaamoleen biroo dhugaa lafa jiru kana hubachuu qabu.
Qindeessaan Charinnat Hundeessaa
Torban kana/This_Week 7712
Guyyaa mara/All_Days 1817132